Wararka Qalabka Adeegga iyo Sheekooyinka ee Calietc.com - Alietc.com
Mashiinka Iibsanaya- Ganacsi Faa'iido Leh
Mashiinka iibinta: Mashiinka wax lagu iibiyo waa mashiin si otomaatig ah u siiya macaamiisha waxyaalaha ay ka mid yihiin cunnada fudud, cabbitaannada, sigaarka, iyo tikidhada bakhtiyaanasiibka ka dib lacag caddaan ah, kaarka amaahda, ama kaar si gaar ah loo abuuray ayaa la geliyaa. Mashiinka iibinta ee ugu horeeya: Mashiinadii iibinta ee ugu casrisanaa ee casriyeynta lagu shaqeysiiyey ayaa laga bilaabay London, England, horaantii 1880-meeyadii, iyaga oo qeybinaya […]Read More
Maxay Ganacsato Badan u Hirgelinayaan Nidaamyada POS?
Waa maxay POS? POS waxay u taagan tahay barta iibka. Barta iibku waa marka macaamil maxalli ah la sameeyo. Dhamaadka iibka, tafaariiqle ayaa xisaabinaya qadarka uu ku leeyahay macaamilku, wuxuu tilmaamayaa lacagtaas, wuxuu siin karaa qaansheeg macaamilka, wuxuuna tilmaamayaa ikhtiyaarada macmiilku inuu ku bixiyo. Doorashada […]Read More
Kordhi Meheraddaada Hoteel Hoteelka Ugu Caansan Hotelka
Waxyaabaha lagu raaxeysto ee hudheellada: Meelaha qaarkood ee kirada ah, waxyaabaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay la heer noqdaan dhammaan qolalka. Kuwa kale, waxaa lagu heli karaa kharash dheeri ah. Isbeddellada ka imanaya adeegyada hudheelka: Erayga: adeegsi gurguurasho! Maaha waxa aad u malaynayso. Waa cinwaan warshadeed oo sharraxaya baahida joogtada ah ee loo qabo hudheellada in lagu daro agabyada cusub iyo kuwa soo socda […]Read More
Iibso Qalabka Maaliyadeed
Dhaqaale ahaan, helitaanka ku dhaqanka iibinta qalabka maaliyadeed waxay u baahan tahay uun waxyaabo yar oo muhiim ah. Qalabka iyo waxyaabaha la xiriira sidoo kale waa barta ugu iibinta fiican. Doorka muhiimka ah ee isgaarsiintu ka ciyaareyso isgaarsiinta ganacsiga iyo suuqgeynta adeegyada sidoo kale waxay muhiim u tahay guusha barnaamij kasta oo iib ah. Haddii aadan haysan […]Read More
Bixiyeyaasha Tilmaamaha Ganacsiga
Mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee horjooge cusub ayaa dooranaya alaab bixiyaha teendhada ganacsiga saxda ah. Tani waa mid ka mid ah iibsiyada ugu waawayn ee uu soo bandhige kasta soo bandhigo - teendhadda ganacsiga. Alaab-qeybiye khaldan ayaa lacag kugu kici doona labadaba maalinta dhacdada iyo bilaha soo socda ee ganacsigaaga '[…]Read More
Xulashada Bixiyeha Ugu Fiican ee Dukaankaaga Ama Supermarket-ka
Maxay yihiin qaar ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay inaad iska ilaaliso markaad dooraneyso alaab-qeybiyeyaashaada? Ma sahlana in la helo dhammaan agabyada aad u baahan tahay marka aad furanayso dukaan cusub oo aad ogtahay inaad u baahan tahay alaab-qeybiyeyaasha ugu fiican. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay Qalabka Bakhaarka & Dukaamada. Alaab-qeybiye aad dooratid […]Read More